Free design Garden software Mac
In dunida maanta ee technology sare iyo sayniska hagaajinta, waa ay fududahay in aad gurigaaga iyo beertaada loogu talagalay nidaamka kombiyuutarka. Haa, waxaa jira qalab iyo softwares badan oo la heli karo in lagala soo bixi karaa nidaamyada computer inay sameeyaan naqshadaynta muuqaalka. Iyadoo qaar ka mid ah Softwares kuwaas waxaa loogu talagalay in ay isticmaalaan samaynta xirfadeed, qaar kalena waa la isticmaali karaa oo ay ka imaneysay. Barnaamijyada iyo qalabka waxaa laga heli karaa nidaamyada hawlgalka kala duwan oo ay ka mid yihiin Windows, Mac, iyo kuwa kale. Kuwa soo socda waa liiska 3 sare design software beerta lacag la'aan ah Mac in aad ka fiirsan kartaa degsado
1. Planner Garden
· Planner Garden la yaab leh beerta free design software u Mac taas oo uu leeyahay fudud ah si ay u isticmaalaan iyo interface fudud. Waa lacag la'aan ah oo ah qiimaha iyo mid ka mid ah ugu wanaagsan ee la heli karo.
· Barnaamijkan waxa haboon xitaa arday oo aad aqoon hore ee Softwares sida lahayn oo si fiican u shaqaynayaan ayaa sidoo kale ee xirfadlayaasha.
· Waxa ay bixisaa badan oo dhirta taas oo kaa caawin kara inaad ku qurxin beertaada. Kaqabto in aad sidoo kale abuuri kartaa dhirta caado u laguugu sahlo.
Faa'iidooyinka Planner Garden
· Mid ka mid ah qaababka Tilmaamay barnaamijkani waa in ay bixisaa ururinta weyn ee dhirta iyo geedaha saamayn ugu macquul ah.
· Fiican kale oo qalab tani waa in ay sidoo kale siisaa faahfaahinta ob_x_jects iyo dhirta, samaynta waayo-aragnimo wanaagsan ee aad u. Faahfaahin ayaa kaa caawin in ay qaado dhirta aad jeclaan lahayd inaad qaado.
· Waxa kale oo wanaagsan oo ku saabsan barnaamijkan waa in ay si fiican u shaqeeya bilowga ah iyo Bartayaasha.
Qasaarooyinka Planner Garden
· Tani beerta design software free u Mac aan u tijaabiyo aad u faa'iido badan dadka intooda badan, u danbi ah qaababka ay wanaagsan.
· Negative kale oo la xiriira Planner Garden waa in aysan ogolaan in ay meel dhismayaasha ama qeexaya cabbir meel.
· Waxa kale oo taas uma shaqeeyo saabsan madal tani waa in ay noqotaa mid aad u adag in la isticmaalo barnaamijkan sida ay tahay wax yar oo adag.
User comments / dib u eegista:
1. Kani waa barnaamij fiican u isticmaala guriga kuwaas oo doonaya inay keyd ku dhawaad ​​fikrado muuqaalka ah ee ay yards.
2. Barnaamijka waxa loo sameeyay Australia oo loo maleeyo Hababka beerta iyo noocyada dhirta in ay yihiin caadiga ah ee cimilada in.
3. Waa wax iska fudud. Waxyaalaha qaarkood, sida masaafada xisaabinta, waa anfacaya, laakiin meel fog bay yihiin hadhaysay by diidmo ah. Nasiib wanaag casharka ku software design saboolka ah ma kharash badan.
Features iyo hawlaha
· Haddii aad tahay qof raba beer gurigaaga laakiin aan garanayn sidii ay u qorshee, markaas this qalab naqshadaynta muuqaalka noqon doono faa'iido kuu.
· Barnaamijka waxa uu leeyahay interface ah sahlay iyo waxa laga heli karaa online loogu isticmaalo lacag la'aan ah u xaddi gaar ah oo wakhti, ka dib markii taas oo la bixiyaa.
· Qalabkani waxa uu ku siinayaa qalab badan kuwaas oo kaa caawin in aad qaabeyso aadna qorsheeyo meel beertaada. Ma aha oo kaliya in aad hesho si aad u doorato meesha aad ka dhigi doonaa dhirta, laakiin sidoo kale aad khudaarta.
· Iyada oo barnaamijkan, waxa kale oo aad la samaynta aad la wadaagi karto qorshaha beertaada si aad u hesho isaga / iyada ra'yi ama ra'yigaaga ku saabsan isku mid.
· Isticmaalka software this, aad dhab ahaantii hoos u dhigi kartaa oo dhan dhirta aad rabto in aad meel ka weyn oo sida aad rabto. Laakiin waxaas ka soo hadhay, waxa kale oo aad sameyn kartaa taariikhaha dhaxan, taariikhaha bilaabo gudaha iyo sidoo kale bilaabi log maalin kasta Plangarden.
· Barnaamijka Arintan waxay u sahlaysaa in aad si ay ula socdaan kala duwan, lacagta la beeray, taariikhda beeray iyo sidoo kale maalmaha lagu qiyaasay in ay goosato iyo sidaas noqdo mid aad u faahfaahsan oo user saaxiibtinimo.
· Qodob kale oo wanaagsan oo la xiriira software tani waa in ay sidoo kale siisaa log goosashada ah si aad u awoodaan si ay ula socdaan sida aad u soo ururin kasta oo ka mid ah dhirta.
· Mid ka mid ah qodobada ugu xun oo arrintan ku saabsan beerta design software free u Mac waa inaadan ku dari kartaa wax images in aad log iyo qori kaliya ee desc_x_ription ah.
· Waxa kale oo waxa ka dhiman waayay barnaamijka ama waa inaadan u helida waxyaalaha ka soo baxa ka xigta ama dhirta shaqsi ama barbaro sariirta beerta karin, qalooca ku duuban ah. Sidoo kale, waxa jira hab fudud oo diagramming hadh lahayn.
· Plangarden ma ha ma aad li_x_nk sawiro aad u dhirta in ay maareeyaan tab khudaar iyo tan aad u dhaqmo sida xad ah ama niyad jab dhibic.
1. Sida qof helo cuncun leh (green) suulka qiyaastii bartamihii qaboobaha, Plangarden u muuqataa sidii software riyo aan.
2. adduunka ee technology ayaa noo ogolaaday in aan dhinac kasta oo nolosheenna la wadaagto dadka kale ee internet-ka. Beerta aad cuntada waa laga reebo lahayn. Plangarden kuu ogolaaneysaa in aad la wadaagto qorshaha beertaada abuuray internetka isticmaalaya Facebook, Twitter iyo Youtube.
Software beerta 3. Khudaarta kaa caawin doona inaad si ay u abuuraan goosashada deeqsiya adiga iyo qoyskaaga si ay ugu raaxaystaan.
· VisionScape caan beerta free design software u Mac oo online ka shaqeeya iyo waxay kuu ogolaanaysaa inaad la abuuro wax kasta oo gebi ahaanba ay ka mid yihiin beeraha iyo Bbc.
· Tiro badan oo wax soo saarka iyo muuqaalada design waxaa laga heli karaa barnaamijkan in laguu suurogeliyo in si deg deg ah ku qorshayso beertaada sida aad u rabto iyo wax kasta oo isticmaalaya waxyaabaha aad rabto.
· Software ayaa ku soo beegmay iyada oo arrimo badan oo aad isticmaali karto sidii waxyi halka dhigaayo hantidaada.
· VisionScape kale oo ay bixisaa muuqaal aad kaas oo la xiriiri kartaa xirfadlayaasha iyo aad u hesho talo ku saabsan qaabka uu u beertaada.
· Mid ka mid ah waxyaalaha ugu cajiib ah oo ku saabsan madal tani waa in ay kuu oggolaanayaa in aad wax ka bedel wax gaar ah oo ku saabsan mashruuca muuqaalka dhirta xitaa offline marka ma jiraan wax isku xirnaanta internet.
· Waxa kale oo run ahaantii ka shaqeeya ay raallinimo iyo in Nicmada users waa in aad ka heli kartaa talobixin xirfadeed iyo talo ku saabsan mashruuca ama design iyo u isticmaalaan si ay u sameeyaan horumar.
· VisionScape aad bixisaa awood u leeyahay inuu arko adigoo 3D kaas oo sidoo kale lagu online wadaagi karaa dadka kale.
· Marka la eego liiska astaamaha, software uusan haysan wax khasaaraha sida xidhiidh la leh.
User comments / dib u eegista :
· Software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan naqshado 3D kuwaas oo run ah in ay nolosha la isticmaalayo buugga ee alaabta la mid ah oo loo isticmaalo in shaqo maalmeedka. -http://www.landscapeleadership.com/blog/bid/267533/VisionScape-Takes-Professional-3D-Landscape-Design-Software-Social
· Awoodaha ayaa bandhigga software ka yeela mid ka duwan oo dhan others.-http://www.landscapeleadership.com/blog/bid/267533/VisionScape-Takes-Professional-3D-Landscape-Design-Software-Social
· Software waa heer sare ah oo si sahlan loo isticmaali badnaayeen, waayo, dhammaan noocyada kala duwan ee qandaraaslayaasha muuqaalka raba in ay soo bandhigaan design 3D ama ideas.-http: //www.landscape-design-advice.com/best-landscape-design-software.html # .VlB27XYrLio
Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga Motorola in Samsung
5 Waxyaabaha la Sameeyo la Your New Android Phone
Sida loo Play regelingen on Android Devices
Sida loo Play MOV Files (Quicktime) ee Android Phones
> Resource > Android > Free Garden design software Mac